Ciidamada Turkiga oo gudaha u galay Ciraaq & Dowlada Ciraaq oo cambaareysay | Gaaloos.com
Home » isis » Ciidamada Turkiga oo gudaha u galay Ciraaq & Dowlada Ciraaq oo cambaareysay
Ciidamada Turkiga oo gudaha u galay Ciraaq & Dowlada Ciraaq oo cambaareysay
Cutubyo ka tirsan ciidamada dowlada Turkiga ayaa gudaha u galay gobalka Mosuul ee waqooyiga Ciraaq, tilaabadan oo ay xukuumada Ciraaq ku sheegtay mid lagu soo xad-gudbay madax-banaanideeda.
Ciidamada Turkiga ayaa horey u joogay bilihii lasoo dhaafay dhulka Kurdida ee waqooyiga Ciraaq oo ay xiriir weyn leeyihiin, waxaana la sheegay inay hada usoo gudbeen dhanka nawaaxiga magaalada Mosuul oo hada xarun u ah kooxda ISIS.
Gaadiidka dagaalka iyo ciidamada Turkiga ayaa la sheegay inay wehliyaan ciidamo ka socda Kurdida iyo waliba Jabhadaha Sunnida ah ee kasoo horjeeda kooxda ISIS.
Guddoomiyaha gobalka Mosuul ee dalka Ciraaq Atheel Nujaifi ayaa la sheegay inuu isaga casumay ciidamada Turkiga inay gacan kasiiyaan la dagaalanka ISIS.
Balse Raysalwasaaraha Ciraaq Xaydar Al Abadi ayaa Saaka oo Sabti ah bartiisa Twitterka ku sheegay in Turkiga kusoo xad-gudbay xaduuda iyo madax-banaanida wadanka Ciraaq.
Xukuumada Baqdaad iyo dowlada Turkiga ayaa horey uga dhaxeysay xurguf la xariirta dhanka Shidaalka Turkiga ka gato ismaamulka Kurdida ee Ciraaq, ganacsigaasi oo aan wax dhaqaale ah kasoo gelin xukuumada Baqdaad.
Imaanshaha ciidamada Turkiga ee gobalka Mosul ayaa sidoo kale caqabad ku ah qorshihii dowlada Ciraaq oo iyadu taageero ka hesha dalka Iran iyo Ruushka, arrintan oo markale si adkeyn doonta xiriirka u dhaxeeya dalalkaasi.
Title: Ciidamada Turkiga oo gudaha u galay Ciraaq & Dowlada Ciraaq oo cambaareysay